”Marna nooma sheegin!” – Kenya oo beenisey inay DF Somalia usoo gudbisey shuruud lagu xirey fasixitaanka Jaadka (Jaadku ma xiran yahay?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Marna nooma sheegin!” – Kenya oo beenisey inay DF Somalia usoo gudbisey...
”Marna nooma sheegin!” – Kenya oo beenisey inay DF Somalia usoo gudbisey shuruud lagu xirey fasixitaanka Jaadka (Jaadku ma xiran yahay?)
(Nairobi) 04 Sebt 2020 – Kenya oo ay aad iskugu il xun yihiin laba dal oo dersaanteeda ka mid ah, Somalia iyo Tanzania, oo labaduba hakiyey inay ganacsigii Kenya oo ay ku eedeeyeen siyaasad xumo waxay u baahan tahay xal deg deg, waxaa sidaa qoraalkiisa ku bilaabay Daily Nation.
Tanzania waxay baabi’isay wixii xuquuq degitaan ahaa ee ay dalkeeda ku tegi jireen dayuuradaha Kenya — AirKenya, Fly540 iyo Safarilink Aviation — kaddib markii ay Kenya ku adkaysatay in Tanzanian-ka imanaya la sooco muddo 14 maalmood ah.
Dhanka Somalia, waxaa miiska saaran sheekada Jaadka Miraa kaddib markii gacmo maran lasoo diray wefdi Xamar u tegey inay la xaajoodaan DF Somalia oo u bandhigtay dalabyo badan oo ay ku jirto in kiiladii Jaad ah lagu dalloco $4 doollar oo canshuur ah, taasoo ay dhaqse u aqbaleen, maadaama ay lacagtaasi ka baxayso jeebka Soomaalida uun.
Waxaa dalabka sidoo kale la socdey kuwo aysan socodsiin karin Jamciyadaha Jaadleeydu balse qaab dhega hadal ah loogu sheegay sida: in Somalia loola dhaqmo dal dhigan ah, in ay Kenya joojiso hawada Somalia ee ay ku xad-gudbayso iyo inay iibsadaan badeecooyinka dalka sida kalluunka, bariiska, sonkorta, malabka iyo caanaha.
Beeraleeyda waxaa kale oo loo sheegay in Jaadka kaliya la fasaxayo marka la joojiyo baaritaanka dhexe ee lagu sameeyo duullimaadyada ka yimaada magaalada Muqdisho oo lagu baaro Wajeer.
”Waxaa shaki ku jiraa inay Somalia mug u leedahay inay soo saarto waxyaabahan ay dalbanayso in laga iibsado,” ayuu leeyahay Daily Nation.
Yeelkeede, diblomaasiyiin ku sugan Nairobi oo Daily Nation la hadlay ayaa dalabaadka beeraleeyda la hordhigay ku tilmaamay wax lagu qoslo, iyagoo sheegay in Wasiir Dibadeedka DF Somalia, Axmed Ciise Cawad oo Nairobi u tegey wada hadallo badan oo ay labada dal yeesheen aanu marna ku soo hadal qaadin arrimahan.
“Marna ma jirin dhib dhanka xiriirka ihi waayo mar kasta oo ay jirto arrin ku saabsan xiriirka labada dal, waan fariisan jirney oo ka wada hadli jirney,” ayuu yiri diblomaasigaasi.
Warkan dambe ayaa haddii uu sax u yahay sida uu diblomaasigu u sheegayo wuxuu kashifayaa inaysan DF warkeeda la tegin madasha saxda ah iyo hilinnada ku habboon, balse ay qaab dhega hadal ah u marsiinayso beeraleeyda iyo warbaahinta.
Waxaa intaa dheer, in Jaadka Kenya uu hadda lafteeda si ballaaran u tago dalka, iyada oo magaalada Muqdisho oo ah suuqa ugu wayn Jaadkaasi uu ku tago qaab tahriibis ah oo badda ah via Kismaayo.
Previous articleDadka Muslimiinta neceb oo ”DAWO” cusub loo helay (Daraasad cusub oo yaab leh)
Next articleAqalka Sare & MW Deni oo muujiyey inay wada yihiin indhoole hagaya mid kale (Maxaa dhacay)